Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere FCT Primary Health Board si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags FCT Primary Health Board
FCT Primary Health Board
NGO iji mepụta ihe na-enye aka maka IDP n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ na 2018
Nkwekorita Ike Ịgba Ahụ Ike (MHEI), otu NGO kwuru na Fraịdee ga-emepụta ihe mgbochi maka ndị na-anọchite anya ha (IDPs) na North East na 2018.
Ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu football na-egosipụta nkwenye na nhụsianya nke ụlọ ọrụ Nigeria Football Football (NPFL) na klas nke 2018 CAF.
Ernesto Valverde na-agbanye na Barcelona n'enweghị ihe ndekọ ọ bụla na njedebe nke mmeri Rom
Ernesto Valverde mere ka Barcelona ghara ime ihe ndekọ La Liga maka egwuregwu ndị na-emeghị ihe ọ bụla na-emeghị ka òtù ndị Catalan na-agba mbọ ịbịa na njedebe nke Njikọ Njikọ na Tuesday na n'aka Rom.
#BBNaija: Nnukwu Nwanna na-ewepụ Nina dị ka Isi nke Ụlọ
N'ịchịkwa nhọrọ ndị isi ụlọ na-ahọrọ, Nina, Big Brother ka Cee C, bụ onyeisi ụlọ.
Mmadụ na-eme ka onye agbata obi ya nwụọ maka ịlụso ọganihu nwoke idina nwoke ọgụ
Ụlọikpe dị elu nke Ikeja na Lagos na Tuesday nyere iwu ka ihe onye a na-enyo enyo, Adebayo Ahmed, nọ n'ụlọ mkpọrọ n'ihi ebubo na ọ na-egbu onye agbata obi ya, Samuel Owawu, na ọnwụ.
Ndị na-ere ọkụ eletrik na Cardoso Awodi-Ora nke Ajegunle Apapa na Ajeromi Ifelodun Obodo Gọọmenti Obodo, Lagos, na Fraịdere kpebiri ike ikuku epileptic, nnukwu ụgwọ ịgba ụgwọ na ngwá ọrụ a na-akwụ ụgwọ na obodo ha.
CAF na-eme Friday, Saturday maka Njikọ Njikọ
Kọmitii CAF Interclub na-ekwu na a ga-egwuri egwu Total CAF Champions League na Friday na Satọdee maka ngwụcha izu na Tuesday maka izu ụka.
Onye mmeri nke World Cup Christian Karembeu nyere ndi Super Eagles aka ime nke oma ...
Mmiri ozuzo: NiMET na-adụ ndị ọrụ ugbo ọdụ na ugbo ugbo
Ọrụ a jụrụ Ụlọ Ọrụ N30,000 ụgwọ ụgwọ kachasị ụgwọ Ụlọ House
Òtù Benue katọrọ igbu mmadụ agha na Naka
Abubakar Ago: Ndị nchịkwa Naijiria nwere ike ịga na njedebe ụwa
Minista kwukwara na ịghaghachi ahịa n'ahịa Oando